6kw-30kw Kubota Engine Generator Soo-saare,Soo-saaraha - Fmwpower.com
Kootada Kubota wuxuu ka kooban yahay Kubota tamarta naaftada ah iyo Stamford koronto-dhaliye, koronto-dhaliye Leroy ama koronto-dhaliye FMW oo leh Deepsea, ComAp ama Module kontoroolka Smartgen.
Awoodda Awoodda: 6kw ilaa 30kw
Jiilka Kubota ayaa la door bidaa macaamiisha qaarkood ayaa sabab u ah soo saaritaankooda sare, miisaankoodu yar yahay iyo miisaanka, iyo sare heerka kalsoonida ee suuqa adduunka. Faa'iidada ugu weyn Kootada Kubota waa farsamada si looga jawaabo shuruudaha deegaanka iyo injineernimada codsiga. Jeneraalka dhijitaalka ee Kubota had iyo jeer waxay u hoggaansamaan xakamaynta adag ee soodhaweynta sidaas darteed it marwalba way qancin karaan qaar ka mid ah macaamiisha gaarka ah ee gaarka ah kuwaas oo waa in aad u hoggaansamaan heerarka saafiga. Awoodda awoodda Gaadiidka Kubota wuxuu ka yimid 6kw ilaa 30kw .
1. Shirkadda Kubota Engine Generator Qeexida Aasaasiga ah
Hore : 50kw-660kw matoor matoor dabacsan
Mawduuca : 6kw-30kw Kubota Engine Generator